रेबिजले दुई महिलाको मृत्यु | Nagarik News - Nepal Republic Media
काठमाडौं – कुकुरले टोकेर रेबिज लागेका दुई महिलाको मृत्यु भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालले जनाए अनुसार दोलखाकी ३८ वर्षीया एक महिलाको बुधबार र वाराकी १९ वर्षीया फुलकुमारी चौधरीको मंगलबार मृत्यु भएको हो। उनीहरुलाई उपचारका क्रममा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा ल्याएकै अवस्थामा मृत्यु भएको हो।
रेबिज लागेको कुकुरले टोकेपछि कुकुरको र्यालबाट मानिसमा ‘आरएन ए’ भाइरस सर्दा मानिसलाई पनि रेबिज रोग लाग्छ। कुकुरले टोक्नेबित्तिकै रेबिजविरुद्धको खोप नलगाएमा मानिसलाई रेबिज लाग्छ र मृत्यु हुन पुग्छ। मृत्यु हुने दुवैले कुकुरले टोक्नेबित्तिकै रेबिजविरुद्धको सुई नलगाएका कारण रेबिज लागेको चिकित्सकले जनाएका छन्।
अस्पतालका चिकित्सक डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार वाराकी १९ वर्षीया चौधरीलाई गत वैशाखमा कुकुरले टोकेको थियो। कुकुरले टोकेपछि उनी एक स्वास्थ्यकर्मीको पुगिन्। उनले केही औषधि र टिटानासको सुई दिए। तर केही दिनपछि उनमा रेविजको लक्षण देखियो। पानीसँग डराउने, ढाड दुख्नेलगायतका समस्या उनमा देखिन थाल्यो। यी लक्षण देखिएपछि उनलाई स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइयो। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाले काठमाडौं रेफर गरेपछि उनलाई आइतबार टेकु अस्पताल पुर्याइयो। अस्पताल पुगेको दुई दिनमै उनको मृत्यु भयो।
स्थानीय तथा दुर्गम तहसम्म रेबिजविरुद्धको जनचेतना नपुगेको कारण वर्षेनी रेविजको कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ। कुकुरले टोकेमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क रुपमा खोप लगाउन सकिने हुँदा कुकुरले टोक्नेबित्तिकै स्वास्थ्य चौकी वा अस्पताल जान चिकित्सकको सुझाव छ।
यी दुवै पात्र भरपर्दो स्वास्थ्यकर्मीकोमा नपुग्दा रेविजको सिकार भई मृत्युवरण गर्नुपरेको डा. पुन बताउँछन्। ‘उनीहरु स्वास्थ्य चौकीमा पुगेको भए सही सूचना पाउँथे खोप लगाइहाल्थे,’ उनले भने। अस्पतालमा यी दुई बिरामीबाहेक रेबिज लागेपछि ढिलो गरी उपचारमा आउँदा मृत्यु हुनेको संख्या वार्षिक करिब १२ पुग्ने गरेको छ।
सरकारले रेबिजविरुद्धको खोप निःशुल्क वितरण गर्दै आए पनि सही सूचनाको अभावमा, घरपालुवा कुकुरको भर पर्दा, कुकुर मालिक आफैंलाई पर्याप्त ज्ञान नहुँदा रेबिज लाग्ने गरेको छ। चिकित्सकका अनुसार घरमै पालेको कुुकुरले समुदायका कुकुरबाट रेबिज सारेको हुन्छ सक्छ भने पशुस्वास्थ्यकर्मीले कुकुरलाई रेबिजबाहेक अन्य खोप लगाएको तर घरमालिकलाई जानकारी नभएको अवस्था पनि हुन्छ।
यसबाहेक समुदायमा रुहेको कुकुरले टोकेपछि अनिवार्य खोप लगाउनुपर्छ भन्ने सचेतना समुदायमा नहुँदा आजको युगमा समेत रेबिजको कारण मृत्युवरण गर्नु परेको हो। यो सँगै स्थानीय तथा दुर्गम तहसम्म रेबिजविरुद्धको जनचेतना नपुगेको कारण वर्षेनी रेविजको कारण धेरैले ज्यान गुमाउनु परेको छ।
डा. पुनका अनुसार कुकुरले टोकेमा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क रुपमा खोप लगाउन सकिन्छ। त्यसैले कुकुरले टोक्नेबित्तिकै स्वास्थ्य चौकी या अस्पताल जानुपर्ने उनी सुझाउँछन्। कुकुरले औला, घाँटीदेखि माथिको भागमा टोकेमा पाँच वटा खोप लगाउने गरिन्छ।
प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ०७:४५ बिहीबार
कुकुर रेबिज महिला अस्पताल मृत्यु